स्वास्थ्य र कृषिबाहेकका सबै क्षेत्रमा पुरानै निरन्तरता « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 29 May, 2020 7:41 am
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभएको छ ।
बजेटले उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा जोड दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अपर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । गत वर्ष भन्दा २२ अर्ब रकम बढाइए पनि त्यो रकम प्रयाप्त नहुने उहाँको भनाई छ ।
लकडाउनका कारण सबै उद्योग व्यवसाय धरासयी भएको अवस्थामा उद्योगहरुलाई राहत दिने खालको कुनै नयाँ कार्यक्रम नआएको डा. पोखरेलले बताउनुभयो । सांसद विकास कोषको रकम कटौती गर्न नसकेकोमा पनि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । पैसा विगत वर्ष भन्दा घटाइए पनि कटाउन नसकेको उहाँकाे टिप्पणी छ ।
सरकारले फजुल खर्च घटाउने विषयमा भने केही काम गर्न खोजेको बजेटमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो । राहतको विषयमा कुनै ठोस कार्यक्रम नआएको पनि उहाँको भनाइ छ । डा. पोखरेलले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने र अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने योजना नभएको अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य महत्वाकाक्षीं भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
डा. गोविन्द पोखरेल
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले एनआरएनएलाई ५ करोड १० लाख रुपैयाँ
आयो मेलम्ची ! सुरुङमा पानी हालेर परीक्षण